Beledweyne: Beeshii gubtay calanka Jabuuti oo dhigtay debadbax raali gelin ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
26th October 2014 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Beesha ay kasoo jeedaan maleeshiyo beeleed todobaakii hore ciidamada Jabuuti ee qeybta ka ah AMISOM jid gooyo u dhigtay, kadibna rasaaseeyey xilli ay kusii jeedeen deegaanka Deefow oo colaad beeleed ka jirtay ayaa shalay magaalada Baledweyne ku dhigay debadbax raalli gelin ah. Shaqaaqo iyo debadbax is rasaaseyntaas kadib ka dhacday Baledweyne ayaa keentay in la gubo calanka Jamhuuriyadda Jabuuti.
Dibadbaxan oo lagu tilmaamay kii ugu ballaarnaa oo sannadihii ugu danbeeyay ka dhaca Beledweyne ayaa waxaa ka qeyb-gallay mas’uuliyiin maamulka gobolka Hiiraan oo uu horkacayey C/fataax Xassan Afrax, ardeyda wax ka barata dugsiyada magaalada iyo dad weyne ka kooban qeybaha bulshada.
Dadka debadbaxa ka qeybgalay ayaa sitay boorar ay ku qornaayeen hal-ku-dhegyo lagu taageerayay ciidamada Jabuuti ee qeybta ka ah howlgalka AMISOM iyo calanka dowladda Jabuuti.
Dadka debadbaxayey ayaa sheegay iney aad uga xunyihiin dhacdadii lagu weeraray ciidamada Jabuuti ee “Hiil Walaal” iyo shaqaaqadii lagu gubay calanka dowladda Jabuuti oo ka dhacday Baledweyne.
Guddoomiyaha gobolka Hiiraan C/fataax Xassan Afrax oo ay ku beel yihiin maleeshiyaadka weeraray ciidamada AMISOM iyo dadka gubay calanka Jabuuti ayaa horkacay debadbaxa, waxeyna dadku socod dheer ku maray wadada dhexmarta Baledweyne.
Debadbaxayaasha ayaa isugu uruuray fagaaraha Daljirka Dahsoon oo aheyd halkii dhawaan lagu gubay calanka Jamhuuriyadda Jabuuti, waxaana halkaas la saaray calamada dowladdaha Soomaaliya iyo Jabuuti, waxaana halkaa salaan sharaf ku siiyay ciidammo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed.
C/fataax Xasan Afrax oo ah guddoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan oo ka hadlay debadbaxa ayaa ku hanjabay inaan marna la cafin doonin dadkii gubay calanka Jamhuuriyadda Jabuuti.
“Sharciga ayaa la horkeeni doonaa cid kasta oo ka dambeysay in falkaas lagu kaco, waqti badan ayaana ku binxin doonaa soo qabashada dadkii dadkii gubay calanka dowladda Jabuuti” ayuu yiri C/fataax Xasan Afrax.
Shaqaaqada lagu weeraray ciidamada Jabuuti, islamarkaana lagu gubay calanka dalkooda ayaa timid kadib markii ciidamada Jabuuti isku dayeen iney kala dhexgalaan labo maleeshiyo beeleed oo ku dagaalamay deegaanka Deefow oo 30 KM u jira Baledweyne, waxaana mid ka mid ah labada beelood iska dhaadhicisay in ciidamada Jabuuti la safan yihiin beesha kale.
Ciidamada Jabuuti ayaa suga amaanka magaalada Baledweyne iyo magaalada kale ee Buulo-barde, waxaana markii Alshabaab go’doomiyeen Buulobarde ciidamadas Jabuuti xoog ku gaarsiiyeen halkaas gargaar uu soo dhiibay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle.
Maxkamada ciidamada oo Muqdisho ku toogatay labo lagu eedeeyey dilka wariye & askari